ईन्टरनेट लतवाट फ्रिडम App Download | मेरो कलम
ईन्टरनेट लतवाट फ्रिडम App Download
Nepali March 21, 2013
– के तपाई फेसवुक ट्वीटर हेर्दैगर्दा आफ्नो कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न सकिरहनुभएको छ ? सायदै सहि समयमा काम सम्पन्न गर्न गाह्रो भईरहेको होला । फेसवुकमा म्यासेज पठाउदा,च्याट गर्दा र स्टाटस हेर्दा हेदै समय गाको त पत्तै पाईन्न । अझ ट्वीटरमा वसेपछि त ट्वीटर पढ्दा पढ्दै किन समयको ख्याल गरिन्थ्यो र । युट्युवमा भिडियो हेर्न थालेपछि त एक दुई घण्टाले के पुग्थ्यो । अन्त्यमा अठोट गरिन्छ , आज त म यो काम नसकी ईन्टरनेट व्राउजरनै खोल्दिन तरपनी अठोटले मन किन मान्थ्यो। मनै नमानेपछि आखिरीमा ईन्टरनेट व्राउजरमा कर्सल त पुगिनै हाल्छ । यस्तो लत आफु स्वयमंमा मात्रै, काम गर्ने कार्यालय सघं सस्थाका सहकर्मीहरुमा पनी छ । सवैले भन्छन् अव यो महत्पुर्ण समयमा ईन्टरनेट नै चलाउदिन ।
अफिशियल काम सहि समयमा सकिएन भनेर कम्पनीले त मौखिक उर्दि नै लगाएका हुन्छन् । ठुला कम्पनी तथा सघंसस्थाले महगां एप्सहरु खरिद गरेर त्यस्ता साईटहरु व्याण्ड नै गरेका छन् । विहान ९ वजे देखी साझ ५ वजेसम्म फेसवुक ट्वीटर लगायत साईटहरु निषेध । उपयोगीको हिसावले धेरै महत्वपुर्ण हुदाहुदै पनी त्यसता साईटकै कारण समयमै आफ्नो काम सम्पन्न भईरहेको हुदैन । सृजनात्मक काम गर्न चाहनेहरुको लागी त सामाजिक सञ्जालले सृजना र समय स्वाहाँ नै पारिदिन्छ भन्दा फरक पदैन । अनेक थरीका फोटो, भिडियो,च्याट,म्यासेज हेर्दाहेर्दै एकोहोरो वनाईसकेको हुन्छ । र भन्ने गर्छौ आजको दिन त त्यसै गयो भोलीदेखी त यस्ता साईट हेर्दै हेर्दिन । निश्चित समयको लागी अनलाईन साईट खुल्दै नखुल्ने वनाउने र काम सकिएपछि पुर्न ती साईट खोल्न सकिने वनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्राय लामो समय ईन्टरनेट चलाउनेहरुलाई लाग्ने गर्छ ।
के तपाई निश्चित समयको लागी भर्चुअल शंसारभन्दा वाहिर निस्कन खोजिरहनुभएको हो ? त्यसो हो भने तपाईको लागी फ्रिडम एप्स प्रभावकारी हुनसक्छ । आपँ पनी झरोस् र लौरोपनी नभाचियोस् भन्ने हो भने यो एप्स नै छनोट गर्नु उपयुक्त हो । www.macfreedom.comवाट यसलाई डाउनलोड गर्न सकिन्छ । फ्रिडम एप्स विश्वका ३ लाख भन्दा वढी कम्प्युटरमा प्रयोग भईसकेको छ । यो एप्सलाई कम्प्युटरमा ईन्सटल गरिसकेपछि निरन्तर आफ्नो महत्वपुर्ण काममा ध्यान वसाउन सकिन्छ । निश्चित समयको लागी कुनै साईट नै नखुल्ने वनाउन अथवा केहि सोसिएल साईट मात्रै नखुल्ने वनाएर कम्प्युटरमा निरन्तर काम गर्न सकिन्छ । यो एप्स म्याक तथा विण्डोज दुवैमा उपयोगी छ । त्यस्तै अर्को महत्वपुर्ण पक्ष ती लक गरिएका साईट चाहेरपनी आफुले राखेको समयभित्र भने खोल्न सकिनेछैन । एक पटक गरिएको सेटिङमा कम्तीमा १५ मिनेटदेखी ८ घण्टासम्म ईन्टरनेटलाई नियन्त्रणमा लिन सकिनेछ । विशेषत कार्यालयको कामलाई निरन्तरता दिन सकियोस् भन्ने उदेश्यले नै यो एप्स निर्माण गरिएको हो ।
फ्रिडम एप्स तपाईले निशुल्क र शशुल्क दुवै रुपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । केहि हप्ताको लागी प्रत्येक दिन महत्वपुर्ण सयममा त्यस्ता साईट नै नहेरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्छु भन्ने सोचिरहनुभएको छ भने ट्रायल फ्रिडम एप्स प्रयोग गर्न सकिन्छ । हैन वर्षौ वर्षसम्म कार्यालय समय अवधी भित्र ईन्टरनेट तथा खास साईटहरु नचल्ने वनाउने हो भने न्युनतम दश डलरदेखी २० डलरसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सो साईटमा भनिएको छ, कसैगरी प्रभावकारी काम गरेन भने ९० दिनभित्र पैसा फिर्ता । ईन्टरनेटमा आफ्नो लगाम आफै लगाउने सोचमा हुनहुन्छ भने आजै फ्रिडम एप्स किन प्रयोग नगर्ने ? ~ ७ चैत २०६९ मा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित ।
Nepali August 12, 2012
छड्के सलाम April 9, 2013 Log in to Reply
राम्रो लेख छ ! धन्यबाद सर !
SB Gautam April 9, 2013 Log in to Reply
प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा यहाँलाई पनी छड्के सलाम ।